बजार | News Polar
काठमाडौं । विश्वव्यापी रुपमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढीरहेको बेला नेपाली बजारमा अमेरिकी डलरको भाउमा वृद्धि भएको छ । नेपाली मुद्रा कमजोर भएपछि अमेरिकी डलरको मूल्य वृद्धि भएको हो । कोरोना प्रभाव विश्वव्यापी रुपमा बढ्दै गएको र अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय मुद्रा समेत कमजोर भएपछि त्यसको प्रभाव नेपाली मुद्रामा परेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका […]
सुनको मुल्यमा ओरालो लाग्दै, कतिमा भईरहेको छ कारोबार ?
काठमाडौं । सोमबार तोलामा पाँच सय रुपैया बढेको बढेको सुन मंगलबार ओरोलो लागेको छ । सोमबार तोलामा ७७ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य मंगलबार घटेर तोलामा ७५ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यस्तै चाँदीको मुल्य भने तोलमा ८० रुपैया घटेर ७ सय ९० रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको […]
साताको दोस्रो दिन फेरी उकालो लाग्यो सुनको मुल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मुल्य बढेको छ । सोमबार तोलामा पाँच सय रुपैया बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार १५ सय रुपैयाँ घटेर ७७ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावल सुन सोमबार तोलामा पाँच सय बढेर ७७ हजार पाँच सय रुपैयाँमा कारोबार भएको जनाएको छ । यस्तै चाँदीको भाउ आज तोलामा स्थिर […]
आज पनि ह्वातै घट्यो सुनको मुल्य, कतिमा भईरहेको छ कारोबार ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुन केहि दिन देखी ओरालो लागेको छ । हप्ताको पहिलो दिन आईतबार सुन तोलामा १५ सय रुपैयाँ घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार एकैदिन तोलामा ३ हजार रुपैयाँ घटेर ७८ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार सुन आइतबार तोलामा १५ घटेर ७७ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको जनाएको छ । […]
एकै दिनमा ह्वातै घट्यो सुनको मुल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा सुनको भाउ ह्वातै घटेको छ । शुक्रबार एकैदिन तोलामा तीन हजार रुपैयाँले घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार शुक्रबार तोलाको ७८ हजार पाँच सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । बिहीबार सुन तोलामा ८१ हजार पाँच सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यस्तै चाँदी तोलामा ४० रुपैयाँ घटेर तोलाको आठ […]
फेरी ह्वात्तै घट्यो सुनको मुल्य, कतिमा हुदैछ कारोबार ?
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा सुनको मुल्य ओरालो लागेको छ । बिहीबार तोलामा आठ सय रुपैयाँ घटेको हो । ले घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । बुधबार ८२ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहको छापावाल सुन बिहीबार ८१ हजार पाँच सय रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । बुधबार पनि सुन तोलामा […]
नेपाली बजारमा सुनको ह्वातै घट्यो सुनको मुल्य, तोलाको कति छ ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मुल्य घटेको छ । साताको चौथो दिन अर्थात बुधबार सुन तोलामा रु ४०० रुपैंयाँले घटेको हो । मंगलबार तोलामा ८२ हजार ७०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य बुधबार ८२ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यस्तै तेजावी सुन बुधबार तोलामा ८२ हजार रुपैयाँमा […]
इ-सेवाबाट बीमाको प्रिमियम भुक्तानी गर्दा मोबाईल पाइने
काठमाडौं । जीवन बीमाको प्रिमियम अनलाइनबाट भुक्तानी गर्नलाई प्रोत्साहन गर्ने उदेश्यका साथ इसेवाले आकर्षक उपहार योजना सार्बजनिक गरेको छ । यस उपहार योजनामा कुनैपनि जीवन बीमाको प्रिमियम इसेवाबाट भुक्तानी गर्दा प्रतिकारोबार रू सय सम्म कमाउनुको साथै २५ हजार रूपैयाँ बराबरको मोबाईल जित्न सकिनेछ । यस योजना अन्तरगत एकमहिनामा २० देखि ४९ वटा बीमाका प्रिमियम भुक्तानी […]
सुनको मूल्यमा फेरी नयाँ रेकर्ड, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
काठमाडौ । नेपाली बजारमा सुनले एकपछि अर्को किर्तीमान बनाएको छ । मंगलबार तोलामा दुई सय रुपैयाँले बढेर सुनले नयाँ कीर्तिमान बनाएको हो । नेपाल सुनचाँँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार छापावल सुनको प्रतितोला ८२ हजार सात सय र तेजावी सुन ८२ हजार चार सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । चाँदीको मूल्य भने अघिल्लो कारोवार दिनको तुलनामा […]
एकदिनमा ह्वातै बढ्यो सुनको मुल्य, कतिमा भईरहेको छ कारोबार ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको भाउ बढेको छ । बुधबारका सुन तोलामा दुई हजार दुई सय बढेर अहिले सम्मैको उच्च विन्दुमा पुगेको हो । नेपाल सुनचाँदी महासंघका अनसुार मंगलबार छापावल सुन तोलामा ७८ हजार ३ सयमा कारोबार भएको सुन ८० हजार ५ सय रुपैयमा कारोबार भएको भईरहेको छ । यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य ८० हजार […]